Izindaba - Ibhodi Loqalo - Abahlinzeki Bezitolo Ezidayisa Izitolo Eziku-inthanethi
Ibhodi Loqalo - Abahlinzeki Bezitolo Ezidayisa Izimpahla Ku-inthanethi
Amabhodi Okusika Uqalo -Isitayela Sebhuloho
Manje, engeza indawo yokusika eyengeziwe yanoma iyiphi iphrojekthi yekhishi enkulu noma encane ngokukhethwa kwethu okukhulu okuklanywe kahleamabhodi okusika uqaloembonini eqondile, amanani entengo yewholesale.
Abapheki abavela emhlabeni wonke bayazi ukuthi u-bamboo uyinto efanelekile ukusetshenziswa ekhishini.Kusukela emandleni ayo emvelo kuya ezintweni zayo zemvelo zokulwa namagciwane, kuya ekusebenzeni kwayo okungasindi kukonke, uqalo lusesigabeni salo.Izitayela nosayizi abaningi kuyatholakala njenge-bamboo griddle kanye nekhava yokushisa ye-Jenn Air yakho ne-Viking range.
Kungani usebenzisa amabhodi okusika eBridge Style?
I-bamboo, ithathwa njengotshani hhayi ukhuni futhi yenza inhle kakhuluibhodi lokusika.Iqiniso lokuthi ikhula ngokushesha iyenza ivuseleleke futhi ibe yisinqumo esihle kwabaqaphela imvelo.Uqalo lufana nokhuni ngoba lusenezimbotshana kodwa luqinile kunokhuni.Amabhodi okusika ama-bamboo zilungele ukusika imifino, ukusika inyama noma ukuphakela ama-appetizers.
Izinzuzo zamabhodi okusika uqalo
Uqalo luminyene kune-maple, i-walnut kanye ne-cherry futhi alunambobo kancane ngakho-ke ngeke lungcole kalula futhi lukwazi ukumelana nokungcolisa inyama nezinhlobo ezithile zemifino.
Uqalo luyamelana nokumuncwa kwamanzi, ngakho-ke, ngeke luhlukane noma luqhekeke njengebhodi lokusika elijwayelekile lokhuni.
I-bamboo iyinto ephansi yokugcina izinto
I-bamboo ngokwemvelo iyi-antimicrobial futhi iyinsiza eluhlaza, evuselelekayo kanye ne-eco-friendly
Amabhodi Okusika Aqoshwe Ngokwezifiso
Ingabe ufuna ukwenza ibhodi lakho lokusika liqoshwe ngendlela oyithandayo?Ungenza ngokwezifiso ibhodi lakho lokusika noma ukhethe komunye wemiklamo yethu eyenziwe ngaphambilini!Bheka ukukhetha kwethu
imikhiqizo yomuntu siqu lapha
MOQ:200 PCS noma ngaphansi okudingayo,Nikeza umkhiqizo/logo/ukupakisha ngokwezifiso.